X Mixomi က Mi Mix 2S မျက်နှာပြင်တောက်ပနေသည့်ပြproblemနာကိုတုံ့ပြန်ပြီးဘာကြောင့်ဖြစ်ရကြောင်းရှင်းပြသည် Androidsis
မကြာသေးမီရက်များအတွင်းအသုံးပြုသူများ Xiaomi က Mi ရောသမ 2S ကိရိယာ၏ကင်မရာအက်ပ်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြissueနာကိုသတင်းပို့ခဲ့သည်။
ထိခိုက်နစ်နာသောအသိုင်းအဝိုင်း၏အဆိုအရ၎င်းတို့သည်aသူတို့သည်ကင်မရာအက်ပ်ကိုဖွင့်သောအခါပြသနာများတောက်ပနေသည်။ အသေးစိတ်အားဖြင့်၊ လူတစ် ဦး သည်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်သို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများရိုက်ရန်ကြိုးစားသောအခါကင်မရာအက်ပ်ရှိဘောင်ကွက်ပြတင်းပေါက်မှေးမှိန်သွားသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် Weibo မှတစ်ဆင့်တရားဝင်စကားပြောခဲ့ပြီးအကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြခဲ့သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Xiaomi ၏တရားဝင်အဖြေမှာ ၁/၁၀၀၀ စက္ကန့်ရှပ်တာကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းကြောင့်ပြနာဖြစ်ပွားနေသည်, သောမီးခွက်၏ blink နှုန်းထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်အနက်ရောင်ဘားပြproblemနာကိုမြင်နိုင်သည့်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
Weibo မှတစ်ဆင့်ပေးခဲ့သောရှင်းလင်းချက်သည်တရုတ်အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်လုပ်သူများကဤအသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုပြင်ဆင်ရန်မည်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်မျှမပြောသေးပါ။ သင်ရုံတုန်ခါမှုပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပြီးသည်နှင့် ဘယ်လိုကုသမလဲဆိုတာကိုတော့မပြောသေးပါဘူး.
အဆင်မပြေသည့်အပြီးအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည် လတ်တလော update ကို ဒီနှင့်အခြားမော်ဒယ်များအတွက်ညဥ့်မြင်ကွင်းတစ်ခု function ကိုနှင့်နှေးကွေးသောရွေ့လျားမှုရိုက်ချက်များကဆက်ပြောသည်သိရသည်။ အိုကေ ဒီပြfacingနာကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့သုံးစွဲသူတွေကစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူးသင်၏ဓါတ်ပုံများ၏ဟာ့ဒ်ဝဲသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် Xiaomi သည်ပြproblemနာကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းနိုင်မည့်အသစ်စက်စက်ထုတ်ပေးမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
တိုတိုပြောရရင် Xiaomi Mix 2S ၏နောက်ဖက်ဓာတ်ပုံအပိုင်းတွင် ၁၂ MP နောက်ဘက်ကင်မရာပါ ၀ င်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် 2X optical zoom, portrait mode နှင့် optical image stabilization ကိုထောက်ပံ့သည်။ Sony IMX363 အာရုံခံကိရိယာသည်အမြောက်အများကို1.4μm pixel များသယ်ဆောင်ပြီးမြန်ဆန်သော focus နှင့်မှောင်မိုက်သောအလင်းတွင်ပိုမိုတိကျသောဓာတ်ပုံများကိုသယ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတွင်ပုံရိပ်အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်ဆူညံမှုလျှော့ချရေးယန္တရားလည်းရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » X Mixomi က Mi Mix 2S မျက်နှာပြင်တောက်ပနေသောပြproblemနာကိုတုန့် ပြန်၍ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသည်ကိုရှင်းပြသည်